“Ma fahmi karo heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu biiray kooxda Juventus”…Michel Platini – Gool FM
“Ma fahmi karo heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu biiray kooxda Juventus”…Michel Platini
(Juventus) 29 Agoosto 2018. Halyayga reer France ee Michel Platini ayaa sheegay sida uu ula yaabay heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu dhaqaaqay kooxda Juventus aduun dhan 100 million euro suuqan xagaaga.
Michel Platini ayaa daboolka ka qaaday inuusan marna ku fikirin in Cristiano Ronaldo uu ka dhaqaaqayo Real Madrid isagoo jira da’aada 33 jir, isla markaana uu kula soo guuleestay saddex jeer ee Champions League ah.
Platini ayaa sheegay sidoo kale inuusan wali fahmin sida loo dhameystiray heshiiska iyo halka uu wada hadalka labada dhinac kasoo bilaawday.
“Waa wax lala yaabo in Cristiano Ronaldo uu ka tago Real Madrid isagoo jira da’aada 33 sano, isla markaana kula guuleestay saddex jeer xiriir ah ee Champions League, si uu u tijaabiyo loolan kale ee cusub”.
“Ma aqaano in Juventus ay la soo xiriirtay ama hadii Jorge Mendes uu yahay mid iyaga u soo bandhigay, xaqiiqdii ma fahmi karo sida uu heshiiskan u dhacay”.
RASMI: Mariano Díaz oo dib ugu laabtay kooxda Real Madrid
Pep Guardiola oo shaki galiyay mustaqbalka Raheem Sterling, xili lala xiriirinayo kooxda Real Madrid